Chili : Tahotra Tsunami tany amin’ny nosin’i Paska · Global Voices teny Malagasy
Chili : Tahotra Tsunami tany amin'ny nosin'i Paska
Voadika ny 28 Febroary 2010 21:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Português, Español, Italiano, македонски, English
Fanta-daza noho ireo sary sokitra Polyneziana izay manintona mpizahantany manerantany ny Nosin'ny Paska. Fantatra amin'ny anarana napetraky ny mponina ao ho Rapa Nui moa ity anatin'ny zaratanin'i Chili ity, izay any amin'ny 3500 km andrefan'ny kaontinantan'i Amerika atsimo ary manana mponina maharitra manakaiky ny 5000. Taorian'ny horohorontanin'ny 27 febroary moa dia niahiahy be ihany noho ny fanairana ny amin'izay mety hisian'ny tsunami ny mponina sy ny mpizahantany.
Teo ampitsidihana ny Nosin'ny Paska ilay Meksikana José Alberto Castro (@elgueromex) raha nitranga ny horohorontany ary navoaka ny loza fanairana momba ny tsunami. Nampiasa ny Twitter ny tenany hahalalana vaovao tamin'izay nitranga tany amin'ny tanibe sy hampahalala ny namany ny zaa-misy eo am-pitendreny (sa atao hoe eo am-panoratany ihany?).
Parece ser que nos van a evacuar están esperando olas muy grandes hay les aviso
Toa hoe hosintonin'izy ireo izahay, mety hisy ny onja vaventy, hampahafantariko ihany ianareo.
Nomena baiko hiala ny morondranomasina avokoa na ny mponina na ny mpizahantany ka hamonjy ny faritra avo. Rehefa lany moa ny fotoana mety ho nisian'ny tsunami ka tsy nisy loatra ny tena fahasimbana, dia nanapika tity sarin'ny volana feno niteronterona tambonin'ny nosy ity izy ka nanoratra hoe, “androany, taorian'ny fihazohazoana, dia nanome volana feno ho anay i Rapa Nui.”
Tao amin'ny Nosin'ny Paska ny rahalahin'i José Luis Tapia (@cuatrodjspro) raha nitranga ilay horohontany. Nosokafan'i Tapia ny kaonty Twitter-ny taorian'ny horohorontany hifanakalozany vaovao hamantarany izay fizotry ny toe-draharaha any amin'ny Nosin'i Paska. Taorian'ny niantsoany ny rahalahiny, dia nozarainy ny vaovao izay nangoniny:
acabo de hablar cn mi hermano en isla de pascua y esta todo normal, segun ellos no habra vuelos en los proximos 5 dias
vao avy niantso ny rahalahiko any amin'ny Nosin'i Paska ka mbola milamina tsara avokoa ny zava-drehetra, araka ny nolazain'izy ireo dia tsy hisy zotram-piaramanidina mandritra ny 5 andro.
en isla de pascua hubo un tsunami de caracter leve en el sector de tongariki alrededor de las 9 de la mañana ningun daño ni heridos
Maivana ihany ilay tsunami tao amin'ny faritr'i Tongariki tokony ho tamin'ny 9 maraina tany amin'ny Nosin'i Paska fa tsy dia nisy loatra ny fahavoazana na faharatrana goavana.
Nanokatra kaonty Twitter taorin'ny hovitry ny tany ihany koa i Alejandro Tucki (@JanoTC). Noraisiny ity sary tao atsinanan'ny nosy izay nampiseho faharavana rindrim-bato izay ravan'ny onja tany amin'ny faritra tsy misy mponina:
Saripikan'ny ridrim-bato rava tany atsinanan'ny nosy nopihan'i Alejandro Tucki
Chiliana hafa, Daniel Sovino (@dsavino), izay tany amin'ny nosy ihany koa rehefa nolazaina ny fanairana mety hisian'ny tsunami no nanoratra fa milamina tsara ny zava-drehetra, saingy tsy nisy tsy fahataitairana izany:
todo bien por aca, aparte del susto de despertar con evacuacion de tsunami, la sacamos mas barata que el continente….
Milamina tsara avokoa ny manodidina eto, ankoatra ilay fifohazana niaraka tamin'ny fialana tsunami, maivamaivana noho ny tany amin'ny tanibe ihany ny nanjo anay….
Kolombia 4 andro izay